Degmooyinka ooey ku adkaadeen meeleynta dhallaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka ooey ku adkaadeen meeleynta dhallaanka
La daabacay onsdag 26 september 2007 kl 15.39
Marka laga yimaado 100 degmo oo ka mid ah degmooyinka dalku ka kooban yahey, islamarkaana heyadda socdaalku dhowantan boggeeda internetka ku soo dabici doonto magacyadooda, sida ey ku sheegtey war qoraal ah toddobaadkii ina dhaafey, ayey dhamman inta ka harsa degmooyinka dalku ka kooban yahey ku dhawaaqeen ama horeyba gacan uga geysteen sidey u qaabili lahaayeen soo galootiga, qaasatan dhallaanka kelinimada ku yimaada.
Middaasina oo ka dambeeysey kolkii go’aan ka soo baxey baarlamka dalku go’aamiyey, islamarkaana uu hirgaley 1-dii bishii Juulaay ee sannadkii 2006-dii, in masuuliyadda dhallaanka lagu wareejiyo demooyinka , halkii ey horey u heysey heyadda socdalku.
- Waxaan maanta wixii ka dambeeya daboolka ka qaadeynaa in degmooyinku
buuxyeen baahidii dhallaanka ee sannadka, kuwaasina oo gaareya 1 200, sida ey sheegtey sakaalad u hadashey ururka maamulka degmooyinka iyo gobollada lana yiraahdo Gigi Isacsson,
Waxaa sidoo kale is bedeley, sida ey sheegtey Gigi afartii degmadood e dhallaankaasi lagu meeleyn jire kolka ey dalka yimadaan, kuwaasina oo gaarey illaa iyo soddomeeyo, halka ey 27 kalena ballan qaadeen iney reer ku meeleyn doonaan.
Middaasi ayaa sababtey kor u kac ku meeleynta reer ee degmooyinku ku meeleeyaan dhallaanka ey saami ahaanta u qaabilaan.
Inkasta oo ey sida degmooyinka laga soo xiganeyo sheegeen in aaney aheyn arrin sahlan, sidii ey ku heli lahaayen hooy noocasiya.
Degmooyinka ey middaa u suurtagashey waxa ka mid ah degmada Örnsköldsvik.
Gerd Wedman waa gacan yare ka howlgasha dgmadaa, oo muddo iminka sannad laga joogo qaabsihey, meleyseyna shan dhallaan, dhowaantanna fileya iney soo gaaraan saddex hor leh. Inkasta oo aaney war u heyn halka ey ku meeleyn lahaayeen. Mar ey ka hadlesey middaana waxey tiri.
- Kolka aannu meeleyneno dhallaanka dalka u dhashey iyo kuwa soo galootiga ahiba wey nagu adag tahey.
Hase yeshee sannad horteed kolkey shan nagu soo gaareen waxaan nasiib u yeelaney inaan markiiba reer u hello.
Waxaan u sameyney xayeysiin, nasiib wanaag waxaa markiiba soo codsadey dadyoow u qalma, balse garan meyno sida ey xaaladdu noqon doonto saddexda iminka foodda innagu soo haya.
Marie-Louise Björkman, ahna madaxa heyadda xafiisk bulshada ee degmada Danderyd islamarkaana ka tirsan xisbiga Modarat-ka, waxey qabtaa iney dhallaanka uga sahlantahy sidey bulshada ula qabsan lahaayeen haddii markiiba lala dejiyo reer iswidhish ah, halka ey ku noolaan lahaayeen xero oorfano. sida ey ku sheegtey war laga.
Amurtaa ayey ka biya diidey Ann-Charlotte Smedler, ahna caalin ka howl gala jaamicadda Istockholm, isamarkaana ku takhasustey cilmiga maskaxda ee dhallaanka aan qaan gaarin.
Iyadoona sheegtey in kala doorashadu wanaagsan tahy, balse aan la oran karin dhallaanka gebigood mid un baa u roon.
- Xal keliya lama karo inuu dhallaanka u wada wanaagsan yahey. Sida ey sheegtey Maria-Louise Björkman..
Ilma walba nooc xannaano ka duwan kan kale ayuu u baahan yahey.
Islamarkaa waxaan qabaa in reerka dhallaan loo geeyo uu qaadeyo masuuliyad ballaaran. Haddii middaa laga soo bixi karo ayey wanaagsan tahey.
Waxaan mar labaad ku celineyaa in amuurtaasi tahey masuuliyad ballaaran. Sida ee sheegtey Ann-Charlotte Smedler, oo ka howlgasha jamicadda Istockholm.
Gerd Wedman, oo ka howlgasha degmada Örnsköldsviks. Ayaa la qabta Ann-Charlotte middaa.
- Ma jirto jawaab qura ee middaa laga bixin karo. Waxey wax badan ku xiran tahy da’da iyo marxaladda dhallaankaasi ku jiro ama soo marey.